မန္တလေးမြို့ နှစ်သစ်ကူးည လုံခြုံရေးအတွက် ခရိုင်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့များအပြင် ရဲတပ်ရင်းမှ အင်အားမ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့ နှစ်သစ်ကူးည လုံခြုံရေးအတွက် ခရိုင်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့များအပြင် ရဲတပ်ရင်းမှ အင်အားမ??
နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကာလဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက် ညပိုင်းအချိန်လုံခြုံရေးအတွက် မန္တလေးခရိုင်အတွင်းရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအပြင် ရဲတပ်ရင်းများမှ အင်အားများထပ်မံဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း မန္တလေး ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှသိရသည်။ ”အရေးကြီးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့ ခရစ္စမတ်ညပိုင်းနဲ့နှစ်သစ်ကူး ညပိုင်းတွေမှာတော့ ရဲတပ်ရင်းမှ လုံခြုံရေးအင်အားတွေ ဖြည့်တင်း သွားမယ်။ လူစည်ကားတဲ့နေရာ တွေဖြစ်တဲ့ ကျုံးဘေး၊ မနော်ရမ္မံ ကွင်းနဲ့ကန်တော်ကြီးတို့မှာ လုံခြုံ ရေးတွေပိုပြီးလုပ်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က နှစ်သစ်ကူးညမှာ ကြီးကြီးမား မားအမှုအခင်းဖြစ်တာ သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ ခိုက်ရန်ဖြစ်တာလောက်ပဲရှိခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်အတွက်လည်းလုံခြုံ မှုအတွက်က အရင်ကထက်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်”ဟု မန္တ လေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူး ကြီး မျိုးအောင်ကပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးညပိုင်းအချိန်က မန္တလေး တောင်၊ ကျုံးအရှေ့တောင်ထောင့်ရှိ Hilton ဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော် မတီရုံးရှေ့ရှိ ကျုံးရေးပန်းအလှ၊ မ နော်ရမံ္မကွင်း တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ၊ ဦးပိန်တံတားနှင့် မန္တလေးကန် တော်ကြီးတို့တွင် ည ၁၂ နာရီ အထိစောင့်ဆိုင်း၍ မီးရှူးမီးပန်းများ လွှတ်တင်ခြင်း၊ ဗြောက်အိုးများ ဖောက်ခြင်းဖြင့် နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
မန္တလေးမြို့ပေါ်လုံခြုံရေးအတွက် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် အောင်မြေသာစံ၊ ချမ်းအေးသာစံ၊ မဟာအောင်မြေ၊ ချမ်းမြသာစည်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်၊ အမရပူရနှင့်ပုသိမ် ကြီးမြို့နယ်များအတွင်း လှည့်ကင်း၊ ရပ်ကင်းနှင့် ဝပ်ကင်းများဖြင့်နေ့ စဉ်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို ရဲတပ်ရင်းများမှအင်အားများဖြည့်တင်း၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။